Ugu yaraan afar qof oo ku geeriyootay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan afar qof oo ku geeriyootay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
March 25, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar qof ayaa ku geeriyootay qarax ka dhacay Muqdisho maanta oo Axad ah, sida ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammnaaka iyo caafimaadka ay sheegeen.
Gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa ayaa ku qarxay meel u dhow xarunta baarlamaanka Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo kuyaala Muqdisho, sida ay ilo-wareedku sheegeen.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay qaraxa maanta oo Axad ah, sida ay tabiyeen warbaahinta ku hadasha afka ururka.
Asbuucii lasoo dhaafay, qarax gaari ayaa 18 qof ku dilay Muqdisho, waxaana masuuliyadiisa sheegtay Al-Shabaab.
Inkastoo Mareykanku uu kordhiyay duqeymihiisa ka dhanka ah Al-Shabaab, ayna dowladda Soomaaliya adkeysay ammaanka caasimada, ururka argagixisada ah ayaa weli awood u leh in uu qaado weeraro.
March 23, 2018 Tirada dhimashada qaraxii ka dhacay Muqdisho oo gaartay 18 qof
At least four killed in car bombing in Mogadishu
Madaxweynaha Soomaaliya oo kulan kula yeeshay Addis Ababa hoggaamiyaha maamulka Soomaaliland
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan kula yeeshay Addis Ababa madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya, Cabdinuur Maxamed ayaa wakaalada wararka AP u xaqiijiyay kulanka, [...]
Ciidamadda Puntland iyo Somaliland oo isku dhac ku dhexmaray meel u dhow Tukaraq
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamo katirsan Puntland iyo Somaliland ayaa isku dhac ku dhexmaray meel u dhow tuulada Tukaraq ee gobolka Sool subaxnimadii saakay oo Axad ah, sida ay sheegeen ilo-wareed ciidamada ah. “Isku dhac u dhaxeeya [...]